ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
Lever ကြေးဝါ Ball Valve များကိုကိုင်တွယ်ပါ
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8601 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ4"??4မှ" ?? အလုပ်လုပ်သည့်အလတ်စား - ရေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP /...
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8603 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, M / F ကို နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: မှ3/ €8â€To2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8604 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / M က နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: မှ3/ €8â€To1â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
3/4 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် NPT Port အပြည့်
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8605 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, M / M နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: ၁ / ၂ မှ€ ၁ မှ€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ရေကြေးဝါ Ball ကိုအဆို့ရှင်
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8606 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ €4â€To4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8607 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် လျှော့ချဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8608 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် အပြည့်အဝ ဆိပ်ကမ်း , F / F ကို နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: ၁/၂ မှ€ ?? To4âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8609 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ 4â€ ?? €4âသို့ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ပိုက် PTFE ထိုင်ခုံများအတွက်ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင်
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8610 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Reducde ဆိပ်ကမ်း , F / F ကို နီကယ်ပြား အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ€ ?? €4âသို့ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ပိုက်များအတွက် Chrome ကို Plated ကြေးဝါ Ball Valve
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8611 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F ခရုမ်း Plated အရွယ်အစား: 1 / မှ 2a € ?? To2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။...
ပိုက်များအတွက် NPT ကြေးဝါရေ Ball ကိုအဆို့ရှင်
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8612 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် လျှော့ချဆိပ်ကမ်း, F / F ခရုမ်း Plated အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? 1â€ရန် ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8613 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် အပြည့်အဝ ဆိပ်ကမ်း , F / F ကို ခရုမ်း Plated အရွယ်အစား - ၁/၂ မှ€To1âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8622 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် အပြည့်အဝ ဆိပ်ကမ်း , F / F ကို အရွယ်အစား - ၁/၄ မှစ။ To4âမှ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင်
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8623 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ လျှော့ချဆိပ်ကမ်း အရွယ်အစား: 1 / မှ 2a € ?? To2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8624 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် လျှော့ချဆိပ်ကမ်း, F / F အရွယ်အစား: 1 / မှ €4â€To4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
Solder Ends နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8625 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Solder ကိုအဆုံးသတ်နှင့်အတူ Non-Standard ဆိပ်ကမ်း အရွယ်အစား: 1 / မှ 2a € ?? To2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8616 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ 2a € ?? To4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ပိုက်များအတွက်ကြေးဝါ Ball ကို Valve
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင်။ ART.8617 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် လျှော့ချဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ 2a € ?? To2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါပိုက် Ball ကိုအဆို့ရှင်
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် KS-6190 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ €4â€To4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
သော့ခတ် Cap နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင်
သော့ခတ် Cap နှင့်အတူကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8631 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် သော့ခတ် Cap နှင့်အတူ Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / M က နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? To1â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် PN25 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် CW617 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Thread အတုကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် အသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင် အိမ်သာဘောလုံးအဆို့ရှင် ကြေးဝါဘက်စုံသုံးအဆို့ရှင်